Domingo Buesa. Wareysi lala yeeshay qoraaga Galabtii gubay Zaragoza | Suugaanta Wararka
Domingo Buesa. Wareysi lala yeeshay qoraaga galabtii gubtay Zaragoza
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 04/01/2022 12:00 | La cusbooneysiiyay 29/12/2021 18:00 | Wareysiyada, Qorayaasha
Sawirka daboolka ah, waxaa leh Domingo Buesa.
Axada Buesa ayaa taariikh dheer ku leh barida iyo faafinta Taariikhda xirfad iyo shaqo. In ka badan 60 buug oo la daabacay, taariikhyahankan ayaa sidoo kale qoraa sheeko-yaal iyo Galabtii uu Zaragoza gubay waa cinwaankiisii ​​ugu dambeeyay. Aad baad ugu mahadsantahay waqtigaaga aad ii dhiibtay arrintan wareysi, ugu horrayn sanadkan cusub, halkaas oo uu in yar oo ku saabsan wax walba inooga warramay.
Domingo Buesa - Wareysi
WARARKA Suugaanta: Waxaad tahay taariikhyahan leh in ka badan 60 buug oo la daabacay. Sidee buu ahaa buuga loogu booday?
DOMINGO BUESA: Muddo laba sano ah, tafatiraha Javier Lafuente ayaa iga codsaday inaan u qoro sheeko-abuur si uu ugu daro ururinta Taariikhda Aragon ee Novel, waxaa tafatiray Doce Robles. Ugu dambeyntii, waxaan ballan qaaday in aan isku dayi doono laakiin taas Kuma aan qancin in aan fulin karo amarkaSababtoo ah waligiis muu samayn sheeko cusub, waxa kale oo uu ixtiraam weyn u hayay habkan xiisaha badan ee taariikhda loogu soo dhawaynayo bulshada.
Waxa aan xasuustaa xagaagii in aan bilaabay in aan buug sheeko-abuur ah ka qoro mawduuc aan wax badan ka bartay oo aan xataa daabacay. Oo halkan waxaa kacday yaabab weyn: kaliya suurtagal ma ahayn inaan sameeyo, laakiin sidoo kale waxay i siisay qanacsanaan aad u weyn. Waan ku farxay qoraalka sheekadaas oo ku saabsan sheeko dhab ah, saacado ayaa ku dhaafay dareen la'aan iyo dhacdadii 1634 waxay heshay nolol iyo firfircooni deegaankaas maktabaddayda. Jilayaasha waxay ka soo muuqdeen kombayutarkayga, muddo ka dib, waxay igu danbeeyeen inay i geeyaan halkii ay ka fikirayeen. Waxa loo caleemasaaray silica ayaa noqday xamaasad. La dhashay Waxay qaadan doonaan Jaca waaberiga.
KUWII: Galabtii uu Zaragoza gubay Waa sheeko labaad oo aad haysatid. Maxaad nooga sheegtaa xaggee fikraddu ka timid?
DB: Guusha sheeko-abuurkii ugu horreeyay ayaa nagu kallifay inaan tix-gelinno, tafatirahayga, xaqiijinta qayb labaad. Haddana mawduuca aniga ayaa soo jeediyay, mar haddii aan fahmay in ay tahay in aad hindisayso mawduucyadaas iyo meelaha taariikhda ee aad si fiican u taqaan. Xaaladdan oo kale waxaan ahaa xamaasad ku saabsan shaxanka Ramón Pignatelli, sawirka weyn ee Zaragoza, iyo deegaankaas Kacdoonkii Roodhida ayaa la kulmay, si arxan darro ah u riday 1766 by bucklers. Furaha fahamka sida sheekadan loo tixgaliyay ayaa ah in la helo labadii sano ee shaqada ee ay igu qaadatay inaan ku dhejiyo bandhig weyn oo ku saabsan Zaragoza of the Enlightenment, oo cinwaankeedu yahay Jacaylka Xoriyadda. Taasina waxay u sheegaysaa sheekada, qiirada horumarka dadka iftiimay in ay ku noolaadaan kacdoonka dad aan rooti haysan oo ay ku adag tahay in ay bixiyaan kirada sare.
KUWII: Ma ku noqon kartaa buuggii ugu horreeyay ee aad akhriday? Oo sheekadii ugu horeysay ee aad qortay?
DB: Laga soo bilaabo da'dii aad u yaraa, runtii waxaan jeclaa akhriska, waxaan u maleynayaa inay tahay aasaaska iyo inay tahay saldhigga mashruuc kasta oo shakhsi ah. Buuga ugu horreeya ee aan xasuusto akhrinta waa daabacaadda carruurta ee Lazarillo de Tormes, oo uu ii dhiibay adeerkay Teodoro, awoowgay walaalkii. Taasi waxay ahayd daah-furnaan waxaanan bogaggeeda ka galay buugaag kale oo qadiimi ah oo ii furay adduunyo talo-bixineed. Saamayntan ayaan bilaabay inaan wax qoro sheeko ku saabsan nolosha ayeeyaday Dolores, waxaan ka xumahay in uu ku lumay imaatinka badan, taas oo aan u xiisaynayay dabeecadda iyo aragtidiisa adduunka ku xeeran. Waxaan had iyo jeer dareemayay luminta sheekada qoyska ee igu kaliftay inaan wajaho xaqiiqda ah inaan qeexo xaqiiqda, inkastoo ay tahay inaan qirto taas. dhexda masiibada Waxaan ku fikiray inaan qoro sheeko yar oo macaan, oo cinwaankeedu yahay Wadaadkii iyo macalinkii, kaas oo dhacay 1936-kii oo ay ku jiraan waxyaabo badan oo ay ayeeyday ii sheegtay.
Anigoo aqoonsan guusha buuggan, oo ay ahayd in dib loo daabaco toddobaad ka dib markii lagu sii daayay dukaamada buugaagta, waa inaanan qarin xaqiiqda ah in waxaa dhacay guuldarrooyin, tusaale ahaan, markii aan bilaabay sheeko cusub oo ku saabsan Ramiro II oo aanan weligay dhamayn oo aanan garanayn meel ay ku sugan yihiin, mar haddii aan horeba u jihaysan jiray kaydka iyo cilmi-baadhista adduunka. Taas macnaheedu maaha, ka fog, inaadan noqon karin qoraa-abuure wanaagsan iyo taariikhyahan iyo cilmi-baare wanaagsan. Labaduba waxay ku shaqeeyaan luqadda iyo kartida -malaha awoodda - si ay u fahmaan waxa dukumeentiyadu noo sheegaan ama noo sheegaan.
KUWII: Qoraa madax ah? Waxaad ka dooran kartaa wax ka badan hal iyo dhammaan waayihii.
DB: Had iyo jeer waan jeclaa tiraabtaas Azorin Iyada oo aad ku dareemayso muuqaalada Castile, waxaad maqlaysaa gambaleelka kaniisadaha tuulooyinka oo qorraxda jiifa, waxaad ku dhaqaaqday aamusnaanta galabnimada iyada oo siesta bannaanka aan dhammaadka lahayn ee siisay Don Quixote ama Teresa de Jesús muuqaal muuqaal ah ... Oo waxaan ahay xamaasad ku saabsan tiraabta ee Awood sheeg taas oo adduunyo male-awaal ah, amni-darro, cabsi hurda oo nagu dhex jirta laga soo jeediyo, xasuuso naga dhigaya inaan u socdaalno waayihii hore iyo qaabkii ay ku noolaayeen tuulooyinka ugu fog ee Moncayo.
Ma joojinayso xamaasaddayda nadiifinta afka Machado, quruxda ereyga oo ah qalab muujinaya dareenka. Oo dabcan waxaan u arkaa farxad Platero iyo aniga, taas oo aan ahayn wax ka badan isku dayga in la sameeyo tan ugu la taaban karo ee caalamiga ah, si loo sameeyo qallafsanaanta nolol maalmeedka mid aad u fiican, si loo fahmo in aamusnaanta ugu dhow iyo kan ugu diiran ay na raaci karto.
Waxaan ahay a akhristaha hal-abuur leh oo waxaan ka helaa buugaagtaWaligay maan joojin akhrinta mid bilawday, inkasta oo noloshu ay sii socoto aad garanayso in wakhtigu xadidan yahay oo ay tahay in aad si hufan uga faa’iidaysato.
KUWII: Waa kuwee dabeecadda buugga aad jeclaan lahayd inaad la kulanto oo aad abuurto?
DB: Sida aan hadda idhi, waan jeclahay Platero iyo aniga sababtoo ah waxaan u maleynayaa inay daaqad u tahay fudaydnimada, oo lagu ogaanayo xaqiiqada aadanaha. Erayada ayaa sawir ka qaadaya bogaggeeda, dhammaantoodna dhammaantood waa caddayn nabadeed oo lala yeesho adduunka. La kulan Platero, ka fakar, isaga eeg. Waxaan jeclaan lahaa inaan la kulmo oo aan abuuro jilayaasha qaar ka mid ah novelyada soo dir, sida mosén Millán de Requiem oo ah tuulo isbaanish ah. Dabcan Duke Orsini ee Boosaaso.
KUWII: Ma jiraa hiwaayad gaar ah ama caado marka ay timaado qorista ama akhrinta?
DB: Aamusnaanta iyo xasilloonida. Waxaan jeclahay in aamusnaantaas ay igu hareeraysan tahay, waayo, ma jiro wax kugu mashquulinaya safarkan hore, sababtoo ah markaan qoro waxaan ku jiraa qarni fog oo aan ka bixi karin. Ma maqli karo codadka hadda, ama dhawaqa garaaca taleefanka gacanta ee si kali-talis ah u soo duulay sirta. Waxaan jeclahay in aan bilaabo qoraalka bilowga ah oo aan raaco nidaamka uu novelagu yeelanayo, ma jecli boodada sababtoo ah jilayaasha sidoo kale waxay kugu hoggaamiyaan waddooyin aadan go'aansanin, ugu dambeyntiina, waxaad hagaajineysaa waddada. maalinba maalin. Sidaan sheegayey, in kasta oo aan ka fekerayo meelaha bannaan ee ku socda waddada, oo aan safrayo inta aan ka fekerayo muuqaalka ama aan seexanayo. Had iyo jeer waxaan wax ku qoraa aamusnaanta habeenka ka dibna waxaan u gudbiyaa xaaska iyo inantayda boggaga ka soo baxa si ay u akhriyaan oo ay u soo jeediyaan fikrado kala duwan. Xaqiiqda lidka ku ah dareenka qoraaga ayaa muhiim ah.
KUWII: Iyo meesha aad doorbidayso iyo waqtiga aad ku qabanayso?
DB: Waxaan jeclahay inaan qoro. Maktabadayda, kombayuutarkayga, oo ay ku hareeraysan yihiin buugaagtayda dhulka iyo buug-yaraha -mararka qaarkood ajande weyn oo madhan - kaas oo aan ku qorayay dhammaan habka diiwaan-gelinta dhacdada si ay u noqoto mid cusub. Bogaggeeda waxaa ku jira tixraacyada akhrinta la sameeyay, sharraxaadaha jilayaasha (sida aan u malaynayo), taariikhaha aan cutubka cutubka u guurno, dhab ahaantii wax walba. Y Caadi ahaan waxaan wax qoraa habeenkii, ka dib laba iyo toban habeenimo iyo ilaa waaberiga subax sababtoo ah waa xilliga xasilloonida ugu weyn. wakhtigaas oo waayo-aragnimada habeenka lafteedu ay deegaanka mugdi ku jirto waxayna kuu ogolaaneysaa inaad noolaato waqtiyo kale, xitaa haddii ay tahay arrin nafsi ah oo kaliya. Waa wakhtigaas markaad indhahaaga xirto oo aad dhex marto Zaragoza 1766 ama magaalada Jaca ee jiilaalka qabow ee 1634 ...
KUWII: Ma jiraan noocyo kale oo aad jeceshahay?
DB: Waxaan jeclahay inaan akhriyo. gabay, classic iyo casriga ah, taas oo i dejinaysa oo igu riyoonaysa muuqaallo nolosha ka buuxa. Waan ku raaxaystaa tababarka taasoo noo ogolaanaysa inaan si fiican isku baranno. Waxaan ahay u doodaha wax-akhriska taariikhda deegaanka, kaas oo aad wax badan ku baranayso, sidoo kale waxaan aad u xiiseeyaa daawaynta hal-abuurka ee ku bara luqadda sawirka. Laakiin, wax walba ka sarreeya iyo tan iyo yaraantaydii waxaan ogaaday Amaya ama Basques qarnigii XNUMXaadAad ayaan u xiiseeyaa akhriska sheeko taariikhi ah.
KUWII: Maxaad akhrinaysaa hadda? Iyo qoraal?
DB: Waxaan jeclahay in aan akhriyo wax kasta oo gacmahayga ku dhaca, laakiin markaan sii weynaado iyo sida aan tilmaamay Waxaan dareenkayga saaray waxaan rabo inaan akhriyo, taas i xiiseeya, wax i bara, oo i riyoonaysa. Magacyo uma bixin doono sababtoo ah ma jecli in aan kala horraysiiyo, qof walbana taladiisa iyo dantiisa ayuu leeyahay. Waxa cad in aan jeclahay in aan akhriyo buugaagta taariikhiga ah, kuwaas oo aan ku hayo maktabaddayda ballaaran muuqaal muuqaal ah oo dhammaystiran oo ku saabsan waxa lagu daabacay waddankeena. Halkaa Qorayaasha Aragonese lagama waayo Shaqooyinkooda waan akhriyay intii karaankeyga ah, inkastoo aan sidoo kale sharaf u ahay inaan akhriyo asalka oo asxaabta qaarkood ay iga codsadaan inaan akhriyo ka hor intaanan tafatirin.
Haddii hadda ay tahay in aan ka hadlo qoraal, oo ay weheliyaan casharrada aan jeclahay in aan si faahfaahsan u diyaariyo ama maqaallada aan diidi karin, waa in aan tixraacaa laba sheeko: mid aan dhammeeyey. Sawirka Goya hooyadii iyo mid kale oo aan ku bilaabay asalkii qallafsanaa ee dhismaha cathedral-ka Jaca, run ahaantii, iska horimaadkii dhexmaray boqorka iyo walaalkiis hoggaamiyaha kiniisaddu, oo ay ku faraxsan tahay walaashiis Countess Sancha. Waa sheeko xiisa badan maxaa yeelay waa in aan u guntano in aan aragno sida fanku u dhalan karo xitaa iska hor imaadka iyo sida quruxda ay u horseedo raaxaysiga kulanka. In kasta oo haddii aan daacad kuu sheego oo aan sirta kashifo, badhna, waxaan kuu sheegayaa in aan diiwaangelinayey muddo laba sano ah iyo xagaaga oo aan hore u marinayey qorista sheeko cusub oo ku saabsan shantii maalmood ee la yaabka lahayd ee nolosha boqor Aragonese, halbeegga boqorrada Yurub. Waxaan kuu sheegi lahaa in aan aad u xiiseeyo shirkaddan.
KUWII: Ugu dambayntii, sideed u malaynaysaa in xilligan qalalaasaha ah ee ina soo maray loo tirin doono? Xaqiiqda taariikhdeenna miyay mar walba dhaafi doontaa mala-awaalka?
DB: Hubaal qaar badan oo ka mid ah buugaagtayadii hore waxay horeba uga sheekeynayaan waqtiyo la mid ah kuwa hadda aan ku noolaan karno, siyaabo kale iyo meelo kale, laakiin yeynan iloobin in bini'aadamku isku mid yahay oo uu leeyahay isku dabeecad iyo wanaag. cillado isku mid ah. Jilaaganina waa kan naftiisa kaga sarreeya odoroska bulsheed ee uu la leeyahay iyo kuwa ku xeeran, isaga oo furaya adduun waayo-aragnimo u ekaan karta khayaali. Marka aan qoro wada-hadallada loogu talagalay sheeko-abuurkeyga ku saabsan Goya-da bini-aadannimo iyo kan ugu dhow, ee aan hadda daabacay, waan la yaabay sababtoo ah in badan oo ka mid ah waxa caqli-galnimada sawir-qaadaha ayaa sheegaya qiimeyn aad u sax ah iyo dhaleeceynta xaaladdeenna: luminta xorriyadda, farqiga u dhexeeya kuwa talada haya iyo kuwa la xukumo, ku raaxaysiga bani'aadamku ka helo inuu dadka kale dhibaateeyo, marka loo eego suurtagalnimada ... Taariikhdu mar walba way ina baraysaa sababtoo ah waxay leedahay xirfad mustaqbalka.
Si kastaba ha ahaatee, waa inaan idhaahdaa, waxaan ku qanacsanahay in ay noqon doonto xilli la qori doono riwaayado xiiso leh oo aan waxba ku lahayn kuwa maanta la qoray, sababtoo ah falanqaynta xaqiiqda waxay u baahan tahay aragti ku meel gaar ah. Xanaaqdu waa in aanay waligood qaadan qalinka rinjiyeeya waayaha nolosha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Wareysiyada » Domingo Buesa. Wareysi lala yeeshay qoraaga galabtii gubtay Zaragoza
Buugaag ay qortay María Oruña
Doorashada cusub ee Janaayo